Dowlada oo sheegtay in duqeyn lagu diley Bashiir Qoorgaab oo ka tirsan Al-Shabaab - Jowhar Somali news Leader
Home News Dowlada oo sheegtay in duqeyn lagu diley Bashiir Qoorgaab oo ka tirsan...
Dowlada Federalka ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah lagu diley 22kii bishii hore sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Alshabaab.
Sida lagu daabacay Bogga Wakaalada Wararka Sonna duqeyntan ay fuliyeen ciidamada Maraykanka oo ka dhacday degmada Saakow ayaa lagu diley Bashiir Maxamed Duduble (Qoorgaab).
Wakaalada ayaa daabacday in Bashiir uu xilal kala duwan ka hayay ururka Al-Shabaab sida Abaanduulaha Al-shabaab, madaxii howlgalada Kenya, iyo Xubin kamid ah Golaha fulinta, madaxa weerarrada xeryaha Ciidamada.
Dowlada Maraykanka ayaa dhamaadkii bishii hore sheegay in duqeyn uu ka fuliyay Saakow lagu diley sarkaal sare iyo xaaskiisa kaasoo madax ka ahaa weerarkii lagu qaaday saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya.
Balse Qoraal ay hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay 3-dii Febraayo soo dhigtay barteeda twitter-ka ayay ku sheegtay in hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye uu Mahad Karataay iyo Bashiir Qoorgaab ka saaray golaha fulinta ee xarakada Al-Shabaab, kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada.